BALAN QAAD: Mulkiilayaasha Kooxda Liverpool Oo Balan Buuxda U Qaaday Jurgen Klopp Haddii Ay Philippe Coutinho Bisha January Ka Iibiyaan Barcelona. – WWW.Gool24.net
BALAN QAAD: Mulkiilayaasha Kooxda Liverpool Oo Balan Buuxda U Qaaday Jurgen Klopp Haddii Ay Philippe Coutinho Bisha January Ka Iibiyaan Barcelona.
29/10/2017 Mahamoud Batalaale
Mulkiilayaasha kooxda Liverpool ayaa macalinka kooxdooda u sameeyay balan qaad cad haddii ay dhacdo in ay Philippe Coutinho ka iibiyaan Barcelona. Barcelona ayaa markale diyaar u ah in ay Liverpool dalabyo kale u dirto marka uu suuqa bisha January furmo. Barcelona ayaa suuqii xagaagii la soo dhaafay dalabyo badan ka gubisay xidiga ree Brazil balse dhamaantood waxay noqdeen kuwo fashilmay markii ay maamulka Liverpool iska diideen.
Laakiin mulkiilyaasha Liverpool ayaa hadda u muuqda kuwo go’aankoodii badali kara isla markaana aqbali kara in Coutinho uu ku biiri karo Camp Nou laakiin waxay Jurgen Klopp balan ugu qaadeen in ay dhamaan lacagta heshiiska Coutinho ay farta ka saari doonaan si uu kooxda ugu soo xoojiyo.
Sida uu wargayska Daily Mirror daabacay, mulkiilayaasha Liverpool ayaan hal gini ka reebi doonin haddii ay Coutinho ka iibiyaan kooxda Barcelona si uu difaaca kooxdiisa ugu soo xoojiyo iyada oo la soo qaaday magaca Virgil van Dijk oo bartilmaameedka kowaad uu ahaa Klopp suuqii xagaagii la soo dhaafay markaas oo ay Southapton isku khilaafeen iibka xidigan.
Dhinaca kale sida uu wargayska Express sheegay kooxda Barcelona ayaa doonaysa in ay Coutinho ku dalbato 132 milyan gini waana lacag aad uga hoosaysa inta Reds ku qiimaynayso 25 sano jirkan ree Brazil iyada oo Liverpool doonaysa in haddii Coutinho uu kooxdeeda ka baxayo ay marka hore hesho 176 milyan gini.
Barcelona ayaa isku dayi doonta in ay Liverpool ku cadaadiso in ay hoos u dhigto qiimaynteeda iyada oo aaminsan in ay tahay kooxda kaliya ee suuqa ka doonaysa Coutinho inkasta oo ay kooxda PSG tahay kooxda labaad ee Barcelona ku cidhiidhi garlinaysa saxiixa Coutinho.
Wakiilka Philippe Coutinho ee Kia Joorabchian ayaa si adag uga shaqaynayay in uu dilaalo heshiiska uu Coutinho kaga baxayo Anfield laakiin iyada oo xidiga ree Brazil uu tartanka Champions Leaque u saftay Liverpool ayay taasi la micno tahay in haddii ay Barcelona bisha January la wareegto in aanu Champions Leaque uga ciyaari karin balse waxay xoojin wayn uga dhigan kartaa tartanka horyaalka La liga.
Liverpool ayaa si wayn ugu baahan xoojin dhinaca difaaca ah si la mid ah gool dhaliye tayo sarre leh balse sidoo kale kooxda Jurgen Klopp ayaan haysan burburiye asturi kara qaladaadka difaac ee ay kooxdiisu samaynayso.
Si kastaba ha ahaatee, mulkiilayaasha Liverpool ayaa Klopp balan ugu qaaday in lacagta Coutinho ay si toos ah isaga ugu gacan galin doonaan haddii ay dhacdo in ay aqbalaan dalabka Barcelona marka uu bisha January suuqa kala iibsigu furmo.